Shabaabka Muqdisho oo sheegay inay dileen askar & sarkaal ka tirsan AMISOM – SBC
Shabaabka Muqdisho oo sheegay inay dileen askar & sarkaal ka tirsan AMISOM
Xoogaga Xarakada Shabaab ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigey meydad askar ka tirsan ciidamada AMISOM oo ay sheegeen inay ku dileen dagaaladii ka dhacay xaafadaha Hodan & Hawl-wadaag.
Saraakiil ka tirsan ururka Shabaab oo saxaafada la hadley ayaa sheegaya in ciidamadoodu ay askartan ku laayeen dagaaladii maanta dhacay iyagoo sheegay in duulaan ay ku soo qaadeen fariisamadooda ay ku leeyihiin degmooyinkaasi ciidamada DFKMG ah iyo kuwa AMISOM.
Afhayeenka Xarakada Al Shabaab Sheekh Cali Max’uud Raage (Cali Dheere) oo maanta saxaafada kula hadlay Xerada Maslax ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu soo bandhigy Meydka Sarkaal uu sheegay in uu ka tirsanaa Ciidamada AMISOM kaasi oo uu tilmaamay inay ku dileen dagaalkii ka dhacay degmooyinka Hodan & Hawl-wadaag, isagoo sheegay in sarkaalkaasi lagu magacaabo Magalada Mudisho Rijad Alfared oo u dhashay dalka.
Sheekh Cali Dheere wuxuu saxaafada tusay Dikumintiyo uu sheegay in uu ay ka heleen Jeebabka Sarkaalka ay soo bandhigeen, waxa uu intaasi ku daray in dagaalka ay ku dileen Saraakiil kale oo ka tirsan Ciidamada AMISOM sida uu hadalka u yiri.
Hadalka afhayeenka xoogaga Shabaabka ayaa ku soo aadayaa iyadoo warsaxaafadeed ka soo baxay AMISOM oo SBC la soo gaarsiiyey ay ku qirteen taliska ciidamada AMISOM in laba askari ay kaga dhinteen dagaaladii maanta sadex kalena ay kaga dhaawacmeen.